Warmly Welcome: အချစ်များ မျှဝေနိုင်ပါစေ
ရင်ဘတ်ထဲ ထည့်ယူသွားတယ် သူငယ်ချင်း
အချစ်ကို မကင်းနိုင်လို့ အချစ်ကို လိုက်ရှာနေတယ် အစ်ကိုရေ။ တွေ့ရင် လက်တို့လိုက်နော်
“ဆုံမှတ်မရှိတဲ့ အဖြစ်လို ခံစားရမယ် ဆိုရင်တောင် သူတို့ရဲ့ အချစ်ဟာ ဝေးကွာမသွား နိုင်ပါဘူး။ အမြဲတစ်စေ လက်တကမ်း အကွာမှာပဲ စုံမက် နေကြမှာပါ၊ ချစ်မြဲ ချစ်နေကြမှာပါ။”
ရင်ထဲက ချစ်ခြင်းတွေကို ဘယ်အရာကမှ
ဒီဘဝမှာ ဆုံစည်းခွင့်မရတော့ဖူး ဆိုခဲ့ရင်တောင်..........
ကိုစေတနာ-- ကျွန်တော့်အတွက် အရင်ရှာ လိုက်ဦးမယ်ဗျာ၊ ပြီးမှပေါ့။
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်-- အစ်ကိုနဲ့ အမလို နားလည်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်ဗျာ ... ကျေးဇူးတင်တယ်...
အချစ်ဆိုတာ လူငယ်တွေအတွက် တင်စားလို့ကတော့ သိပ်ကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းတဲ့ အချိန်မှာ အချစ်ထက် နားလည်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ချစ်လို့ ညားကြတဲ့သူတွေ တယောက်နှင့်တယောက် နားလည်မှုမရှိတော့ အဲဒီအချစ်ဆိုတာကြီးက ဘယ်နေရာမှာမှ သုံးလို့မရတော့ပဲ ရန်ဖြစ်ကြ ကွဲကြ၊ မိသားစုအသိုက်အမြုံတွေ ပြိုကွဲရတာတွေ အများကြီးရှိသလို တယောက်နဲ့တယောက် တခါမှ မတွေ့ဖူးမမြင်ဖူးပဲနဲ့ မိဘပေးစားလို့ ယူထားကြတဲ့ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်နဲ့ အိန္ဒိယက စုံတွဲတွေ ယူပြီးမှ တွေ့ကြပေမယ့် တယောက်နဲ့တယောက် နားလည်မှု ရှိကြလို့ တည်မြဲကြပြီး နားလည်မှုကနေ အချစ်ကို ရကြတဲ့ သာဓကအများကြီးရှိပါတယ်။ အချစ်မရှိပဲ ဘ၀နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်လို့ ရပေမယ့် နားလည်မှုမရှိပဲ ဘ၀နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်လို့ မရဘူးဆိုတာ ဖေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘ၀မှာ အချစ်ထက် နားလည်မှုက ပိုအရးကြီးပါတယ်။ ပျော်ရွင်တဲ့ ဘ၀ဆိုတာ နားလည်မှုမရှိပဲနဲ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ ဘ၀တခုကို တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင် အချစ်ဆိုတာအလိုလို ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ပူဆွေးသောကကို ဖြစ်စေတဲ့ အချစ်ဆိုတာကို မတွေ့တွေ့အောင် ရှာမယ်ဆိုပြီး အချိန်ဖြုန်းနေသူများ ရှိပါက အကြံပြုချင်ပါတယ်။
စိတ်ပူဖော်ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ အစ်မရဲ့ သွန်သင်မှုကို ကျေနပ်စွာ လက်ခံပါတယ်။
အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှု မရှိသေးတာကိုတော့ ၀န်ခံပါတယ်။ သိချင်တာက အစ်မပြောတဲ့ အချစ်ထက် နားလည်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ မှတ်သား သိရှိရပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် (နားလည်မှု) ရဖို့ အချိန်အတိုင်းအတာ ဘယ်လောက်များ လိုအပ်ပါသလဲခင်ဗျာ။ (နားလည်မှု) သာ အမှန်တကယ် သာယာချမ်းမြေ့ တဲ့အိမ်ထောင်မှု တစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်မယ် ဆိုရင် အစ်မရဲ့ ဒဿနကို ကျွန်တော် ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီး (နားလည်မှု)ကို အချစ်ထက်တန်ဖိုးထား ရှာဖွေသွားပါမယ်။ အချိန်မဖြုန်းတော့ပါဘူး။ လေးစားလျက်ပါ။။။
အိမ်ထောင်ရေးမှာ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သုတေသနပြု မှတ်တမ်းတင်ထားတာကို လေ့လာပြီး ပြောတာမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ မျက်စိရှေ့မှာ တွေ့မြင်နေရတာကို ကြည့်ပြီးပြောတဲ့အတွက် နားလည်မှုရဖို့ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ အချိန်ယူရတယ်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို အတိအကျ ပြန်မဖြေနိုင်လို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ လက်ရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုကြည့်ရင် အချစ်ကို သိပ်ကိုးကွယ်တဲ့ အနောက်နိုင်ငံက လူတွေကိုကြည့်ပါ။ ရှိသမျှစုံတွဲတွေက ချစ်လို့ ယူထားတာတွေချည်းပဲ ဘယ်မိဘမှ သဘောတူလို့ ပေးစားထားတာမရှိဘူး ယူပြီးခဏနေရင် ကွဲပြီး အသစ်ထပ်ယူ၊ မကွဲရင်လည်း အချစ်သစ်တွြေ့ အချစ်ဟောင်းကို စိတ်ကုန်ပြီး အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်ကြတယ်။ လက်တွေ့ဖြတ်သန်းရတဲ့ အိမ်ထောင်ရးဘ၀မှာ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ အချစ်ကို ဒီလောက်မတင်စားတဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အနောက်တိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းလောက် လူမှုရေးအရှုပ်တော်ပုံ မရှိတာကို ကြည့်ပြီးပြောခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
သဘောကျတဲ့ ပိုစ်ပါပဲ အကို ။
အကိုပေးတဲ့ဆုရော ကျနော်တောင်းတဲ့ဆုပါ မြန်မြန်ပြည့်ရပါလို၏ ။ :D
ပိုစ့်ရော၊ ကွန်မန့်တွေရော ဖတ်ကောင်း၏။
အချစ်ဆိုတာရှိနေမှလည်း ချစ်သူဘဝရော၊ အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာပါ အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။ “နားလည်မှု၊ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ အပေးအယူမျှတမှု တွေဟာ သူ့အလိုလိုတော့ မဖြစ်တည်နှိုင်ပါဘူး”။ ဘဝတစ်ခုကို အတူတွဲပြီး တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ အမျိုးမျိုးသော ပြဿနာလေးတွေ ရှိလာမှာပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ စိတ်ဓါတ်အင်အားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အချစ်ဆိုတာကို အခြေခံမှလည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ မိဘပေးစားလို့ပဲ ညားကြစေအုံးတော့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို သံယောဇဉ်ဆိုတဲ့ (ချစ်ခြင်းတစ်မျိုးဟုထင်သည်) စိတ်ဓါတ်အင်အားနဲ့ ပေါင်းဖက်နိုင်ရင် ပျော်စရာ မိသားစုဘဝကို တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။
“အချစ် (သို့) သံယောဇဉ်” သည် အိမ်ထောင်မှုဘဝကို တည်ထောင်ရာတွင် အရေးကြီးသော အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။...။တစ်ကိုယ်ရေ ခံစားချက်များသာပါ။ ပိုစ့်လေးကို သဘောကျ၍ တင်ပြလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း။
Also visit my weblog: summer internship
you actually know what you're speaking about! Bookmarked. Kindly also talk over with my website =). We will havealink trade agreement between us
Visit my webpage :: summer internship
Hi there to every one, it's actuallyapleasant for me to payavisit this website, it consists of important Information.
My website hasalot of unique content I've either authored myself or outsourced but it appearsalot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any methods to help prevent content from being ripped off? I'd certainly appreciate it.